Man City oo iska diiday fursad ay kula soo saxiixato Dzeko iyadoo Guardiola uu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda uu heysto.
Home Horyaalka Ingiriiska Man City oo iska diiday fursad ay kula soo saxiixato Dzeko...
Weeraryahanka Roma ayaa loo soo bandhigay kooxdiisii hore oo ay ka maqnaayeen Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus qaybo badan oo xilli ciyaareedka ah Manchester City ayaa iska diiday fursad ay kula soo saxiixato Edin Dzeko suuqa kala iibsiga bisha Janaayo iyadoo tababaraha Pep Guardiola uu ku adkeystay inuu ku faraxsan yahay qaabka kooxdiisa.
Weeraryahanka reer Bosnian ayaa lagu wadaa inuu ka tago Roma ka dib markii uu burburay xiriirkii uu la lahaa tababare Paulo Fonesca waxaana laga yaabaa inuu ku lug yeesho heshiis isdhaafsi ah oo uu la galay xiddiga reer France Alexis Sanchez.
34-jirkan ayaa shan xilli ciyaareed ku qaatay garoonka Etihad Stadium isagoo labo jeer ku guuleystay Premier League, laakiin City ayaa meesha ka saartay inay keensato weeraryahan cusub inkastoo dhaawac iyo xanuun ay ku dhufteen Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus.
Ilo wareedyo ayaa u xaqiijiyey Goal in City loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixato halyeeyga hore, laakiin kooxda ayaa diiday fursad ay ku midoobaan Etihad.
Guardiola ayaa diiday inuu ka hadlo Dzeko, laakiin wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay tirada goolasha uu ka dhaliyay kooxda West brom gaar ahaan guushii 5-0 ta bartamihii isbuuca.
Laakiin wuxuu soo jeediyay in Eric Garcia uu u wareego Barcelona waa dhaqdhaqaaqa kaliya ee ay u badan tahay ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga xirmin Isniinta Kama hadlayo suuqa kala iibsiga halkaan waa ciyaaryahan Roma ah waligeyna kama hadli doono xaalada noocaas ah ayuu yiri ka hor kulanka sabtida ee kooxda Sheffield United.
Dareenkeygu wuxuu yahay inaan ku dhameysan doono xilli ciyaareedka qof walba oo aan ku bilownay xilli ciyaareedka, marka laga reebo hal ciyaaryahan oo qof walba ogyahay inuu dhaqaaqi karo Uma maleynayo inay wax kale dhici doonaan. Waxaan arki doonaa maalmaha ugu dambeeya.
“Kala duwanaanshaha hadafkeena ayaa ah midka ugu fiican horyaalka haatan. Haddii ciyaarteena ay fiicantahay, waxaan dhalin doonaa goolal. haddii ciyaarteena aysan fiicneyn, ma dhalin doonno goolal.
“Waligey cadaadis ma saarin Sergio iyo Gabriel si aan u xaliyo dhibaatooyinka oo dhan ee aan horay u heysano Sababta aan goolal u dhalin karno oo aan ugu guuleysan karno kulamada waa sababta oo ah ciyaarteena lafteeda ayaa ka fiican wax qarsoon oo dheeraad ah ma jiraan.”
City waxa ay ciyaareysay sagaal been abuur ah oo soo daahay iyadoo Ilkay Gundogan uu kaalintiisa qaatay isbuucyadii la soo dhaafay Xiddiga heerka caalami ee Jarmalka ayaa labo gool ka dhaliyay West Brom si uu u dhaliyo 7 gool 10kii kulan ee ugu dambeysay.
Previous articleRivaldo oo yiri Barcelona qalad weyn ayeey ku geleysaa hadii ay iibiyaan Messi.
Next articleMourinho oo shaaca ka qaaday xidiga badali lahaa Keane oo dhaawacmay.